बिहानै बिहान तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खाँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा, जानिराखौ !! | सुदुरपश्चिम खबर
बिहानै बिहान तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खाँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा, जानिराखौ !!
६. इनर्जी लेबल बढाउँछ=मह र तातो पानीको मिश्रणले शरीरमा इनर्जी वृद्धि गर्छ । शरीरमा बढी इनर्जी उत्पन्न हुँदा शरीरको मेटाबोलिज्म र कार्यप्रणालीमा वृद्धि हुन्छ । महले शरीरका अंगलाई ठीक ढंगबाट काम गर्न प्रेरित गर्छ । बिहान तातो पानी तथा कागतीका साथ मह लिनाले शरीर दिनभर उर्जावान बन्छ ।७. तौल घटाउन उपयोगी=मह, कागती र तातोपानीको मिश्रण सेवन गर्नाले भोक पनि कम लाग्छ । यसमा फाइबर पाइन्छ,जसले भोक र सुगर लेबललाई कम गरी पर्याप्त इनर्जी प्रदान गर्छ । यसैले नियमित रुपमा बिहान यसको सेवन गर्नाले दिनभर खाने खानामा पनि कमी हुन्छ । जसबाट तौल घटाउन पनि मद्दत मिल्छ ।